जीन्दगीको चोला कस्तो ? | आरोह अवरोह.....
जीन्दगीको चोला कस्तो ?
Posted on Friday, August 19, 2011 No Comments
आखिरीमा मर्नुपर्ने, जीन्दगीको चोला कस्तो ?
दु:खै मात्र गर्नुपर्ने, जीन्दगीको चोला कस्तो ?
चाहेजस्तो हुन्न रैछ, जीन्दगीको गोरेटोमा
सयौं खोला तर्नुपर्ने, जीन्दगीको चोला कस्तो ?
फूलीरहुँ जस्तो लाग्छ, फूल जस्तै हाँसीखुसी
ओइलिएर् झर्नुपर्ने, जीन्दगीको चोला कस्तो ?
गन्तव्यमा पुग्नलाई, लामो यात्रा पार गर्दा
खाडलमै पर्नुपर्ने, जीन्दगीको चोला कस्तो ?
नचाहँदा नचाहँदै, बाँच्न स्वार्थी दुनियामा
पापीपेट भर्नुपर्ने, जीन्दगीको चोला कस्तो ?